Etu esi eji akara aka mkpịsị aka na akwụkwọ ndetu gị na Linux | Site na Linux
Etu ị ga-esi jiri akara mkpisi aka akwụkwọ ndetu gị na Linux
Mkpisiaka GUI bụ ihe dị mfe iji ngwá ọrụ nke na-enye gị ohere iji gị akara mkpisiaka na banye ma ọ bụ ebe ọ bụla ebe usoro jụọ maka paswọọdụ (gụnyere ọnụ ya).
1 Ndị Agụ Na-akwado
Ndị Agụ Na-akwado
Nke mbụ, gbaa mbọ hụ na Fingerprint GUI na-akwado onye na-agụ ya. Iji mee nke a, m mepee ọnụ wee pịa
Nchịkọta ọgụgụ gị kwesịrị ịbụ otu n'ime ihe ndị a:
045e:00 bc        08f:1600        147e:1003
045e:00 bd        08f:2500        147e:2015
045e:00i        08f:2580        147e:2016
0483:2015        08f:5501        147e:3000
0.- Ọ bụrụ na ị wụnyeworị mkpịsị aka GUI na aka, jide n'aka iwepụ ya kpamkpam. Hichapụ ọnụọgụ abụọ niile, ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ma weghachite mgbanwe ọ bụla ị mere na faịlụ nhazi (karịsịa /etc/pam.d/).
1.- Ọ bụrụ na ị nwere Ubuntu, ịnwere ike ịgbakwunye PPA kwekọrọ:
sudo tinye-apt-repository ppa: mkpisiaka/ mkpisiaka akaGUI
2.- Wụnye usoro ihe omume + ụfọdụ mgbakwunye ndị ọzọ:
sudo apt-nweta wụnye libbsapi policykit-1-mkpisiaka-gui akara aka-gui
3.- Banye ma banye ọzọ. Nzọụkwụ a dị mkpa maka GConf ịmalite ịmalite iji ntọala ọhụrụ maka nchekwa ihuenyo na maka Policyitem daemon ịmalitegharị.)
Ihe omume a ga adi na Sistemụ Ọrụ> Mmasị> GUI mkpisiaka. Ebe ahụ ị ga - enwe ike bido idebanye aha mkpisi aka gị.
Mara: ndị na-anaghị eji Ubuntu nwere ike ibudata koodu isi nke mmemme ahụ na akwukwọ ọrụ.
Ọ na-arịọ maka mkpisi aka gị ịbanye n'ime usoro
Site na ndabara, GDM na-enye ndepụta nke ndị ọrụ nke anyị ga-ahọrọ otu. Mgbe ahụ, ọ ga-adị mkpa iji nyochaa akara mkpisiaka nyochaa anyị nke ọma. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ịhazi GDM ịbanye naanị site na iji onye na-agụ mkpịsị aka, na-ahọpụta onye ọrụ kwekọrọ.
Iji mee nke a, ịkwesịrị ịgbanwe faịlụ /etc/pam.d/gdm. M mepere ọnụ wee dee:
Wee, tinye ndị na-esonụ na mbụ akara na-azọpụta gị mgbanwe:
auth nhọrọ pam_fingerprint-gui.so debug
N'ikpeazụ, gbanyụọ ndepụta njirimara GDM site na iji kọmputa ede iwu na-esote na njedebe.
sudo gconftool-2 --direct --config-source xml: gụgharịa: /etc/gconf/gconf.xml.defaults --type bool --set / apps / gdm / mfe-greeter / disable_user_list eziokwu
May nwere ike ịmalitegharịa igwe maka mgbanwe ndị ị ga-eme.
Iji gbanwee usoro a, hichapụ akara ị gbakwunye na /etc/pam.d/gdm wee gbaa iwu na-eso na ọnụ:
sudo gconftool-2 --direct --config-source xml: gụgharịa: /etc/gconf/gconf.xml.defaults --unset / apps / gdm / simple-greeter / disable_user_list
Ndị ọrụ GNOME: ngwugwu policykit-1-mkpisiaka-gui dochie ndabara PolicyKit daemon nke na-abịa na GNOME (nke dị na ngwungwu policykit-1-gnome). Agbanyeghị, mgbe iwepu GUI mkpisiaka aka, anaghị emegharị ngwugwu ochie; a ghaghi ime ya aka.
Ya mere, TUPU iwepu ngwungwu mkpisiaka-gui, ọ dị mkpa ịtinye ngwugwu policykit-1-gnome
sudo apt-nweta wụnye amụma-1-gnome
sudo apt-nweta wepu akara mkpisi-aka
Ndị ọrụ KDE SC: Otu ihe a metụtara, belụsọ na akpọrọ ngwugwu ahụ polkit-kde-1 kama policykit-1-gnome.
Isi: Mkpisiaka GUI
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Etu ị ga-esi jiri akara mkpisi aka akwụkwọ ndetu gị na Linux
Belisario Ochoa Ochoa dijo
Ahịa onye na-agụ akwụkwọ ị zụrụ nwere ihe jikọrọ ya na ya ??? ka ọ bụ ha niile na-ewepụta ozi mkpịsị aka n'otu usoro ???
Zaghachi Belisario Ochoa Ochoa
Ndewo, maka debian kedu ka m ga esi eme ya?
Ọ dị ka ihe nkiri ọ bụghị ya?
Alfredo Munoz dijo
Kedu bọọlụ, eziokwu
Zaghachi Alfredo Muñoz
Ezigbo isiokwu. Daalụ maka ide ya.
Zaghachi ka emegeve
Ezigbo isiokwu. Ana m ekele gị nke ukwuu maka ide ya.
Ezigbo damn Disqus, m were okwu ahụ ugboro 2 😛
See hụrụ, bụ na mgbe ụfọdụ na nkọwa nke blọọgụ akara ahụ dara (ọkachasị na MuyUbuntu) na ọ bụ ya mere na ha apụtaghị, ọ bụrụ na ijikọ F5 ee
O nwere ike ịbụ… 🙁 Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere ozi.
Emere m ya ma ọ naghị arụ ọrụ :(, ọ bụ na KDE ọ naghị arụ ọrụ ma m ga-ebudata koodu ahụ?)
enwere ụfọdụ okpu
Ale Yaciuk dijo
nsogbu gị bụ nke m, ị nwere nsụgharị 138a: 0005
enwebeghị ihe nlereanya anyị (dịka m nwere ike ịchọpụta)
ma ọ bụrụ na ọ bụrịrị maka nke gara aga (0001), echere m na anyị ga-abụ ndị na-esote 😛
Zaghachi Ale Yaciuk
Huveras Guerrero na-atụgharị dijo
Ndewo, enwere m Pavilion HP dv4-1212la, mgbe m tinyere lsusb m ga - enweta <>, ya na ihe ọ na - ekwu n’elu ọ pụtara na onye na - agụ ya na - akwado ya, ọ ga - abụ ezigbo echiche ịwụnye ya ma ọ bụ ịmara sọftụwia ndị ọzọ kwesịrị ekwesị?
Zaghachi iji Dilver Huertas Guerrero
magburu onwe, ọ bụ ezie na m na-ama enwetatụbeghị-eji na-ahapụ m agụ n'akụkụ ugbu a, m ụtọ !!! 😀 viva linux !!
Nke a pụtara m, enwere m HP
ENVYDV67280LA ~ $ sudo apt-nweta wụnye libbsapi policykit-1-fingerprint-gui fingerprint-gui
E: Enweghi ike ịchọta ngwugwu libbsapi
E: Enweghị ike ịchọta ngwugwu policykit-1-fingerprint-gui
E: Enweghị ike ịchọta ngwugwu mkpisiaka-gui
Didn'ttinyeghi nchekwa. Lelee anya n’iru nke ị kpọtụrụ aha
Onye ọ bụla maara ihe kpatara 10 na-arụ ọrụ na njedebe maka usperuser yana maka onye ọrụ m ọ naghị arụ ọrụ mgbe nbanye?
Michael Silva dijo
Enwere m akwụkwọ ọgụgụ akwụkwọ elitebook 9470m na ​​onye na - agụ ya 138a: 003d Ndaba Sensọ, Inc. VFS491 na enweghị m ike ịme ka ọ rụọ ọrụ na debian, miri emi ma ọ bụ ubuntu
Wunderlist: Task njikwa maka onye ọ bụla
BlueGriffon: a WYSIWYG web editor for Linux